နိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူ့အိမ်ရာနှင့် အငှားအိမ်ရာများ တည်ဆောက်မည်ဟုဆို – shwesathtagan
ခါကာဘိုရာဇီဒေသကို ကမ္ဘာ့စာရင်းဝင်နယ်မြေအဖြစ် အဆိုပြုမည်
ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ၀င်ကြေးနှုန်းထား ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားရန် မရှိဟုဆို
နိုင်ငံအတွင်း လေဆိပ် ၃ ခုကို အဆင့်မြှင့်တင်မည်
ခရီးသွားလာရေးဥပဒေ အတည်ပြုပြီးပါက လိုင်စင်များကို တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင် လျှောက်ထားနိုင်
Golden Hexagon Business Journal
Home > Business News > နိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူ့အိမ်ရာနှင့် အငှားအိမ်ရာများ တည်ဆောက်မည်ဟုဆို
နိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူ့အိမ်ရာနှင့် အငှားအိမ်ရာများ တည်ဆောက်မည်ဟုဆို
by Shwe Media - June 9, 2017 0
အစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများတွင် ပြည်သူ့အိမ်ရာနှင့် အငှားအိမ်ရာများကို ယခုနှစ်အတွင်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောက်လုပ်သွားမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်းများအသင်း တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်စိုးက ပြောသည်။
ပြည်သူ့အိမ်ရာနှင့် အငှားအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အစိုးရ၀န်ထမ်းများအရေ အတွက်နှင့် ၀ယ်ယူလိုသည့် မြို့နယ်များကို စာရင်းကောက်ယူလျက်ရှိရာတွင် လက်ရှိအချိန်၌ စာရင်း ကောက်ယူမှုထက်ဝက်ခန့် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ “ပြည်သူ့အိမ်ရာ လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ တန်ဖိုးသင့် အိမ်ရာကို အစိုးရနဲ့ ကျွန်တော်တို့အသင်းက ပူးပေါင်းပြီး ယခုနှစ်အတွင်း စတင်ဆောက်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အိမ်ရာ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ပင်စင်ယူတော့မယ့်ဝန်ထမ်းတွေကို စာရင်းကောက်ယူနေပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ အိမ်ဝယ်ချင်သလဲဆိုတာကို အဓိက ထားစရာင်းကောက်ယူနေပါတယ်။ ရလာတဲ့ရလဒ်ကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ ပြည်ညှိပြီး ဆောက်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရာတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရောင်းချဖို့ကို အစိုးရက တာဝန်ယူရမှာပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းအနေနဲ့က ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းကို တာဝန်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
HAGL နှင့် City Mart တို့ ပူးပေါင်း၍ ဈေးဝယ်စင်တာ ဆောက်လုပ်မည်
တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေဆုပေးပွဲ ကျင်းပမည်
Golden Hexagon Media Group is established to offer media service in Real Estate Industry of Myanmar. The First product line is publishing Golden Hexagon Real Estate Business Journal (Shwesathtagan Journal) for weekly issues. The second product line is publishing Property Directory. Currently, it is launchinganew product which is ‘’Findmyanmar.com” to fulfill the requirement of real estate industry.
© 2017 shwesathtagan
Powered by Golden Hexagon Group